CHIPFUNDE, UZUMBA — Vagari vemunzvimbo yekwaChipfunde mu Ward 8 mudunhu reUzumba vanoti vari kushungurudzwa nenzira dzakasiyana siyana nevatsigiri veZanu PF. Vagari ava, vazhinji vavo vari nhengo dzeMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, vanoti vari kurambidzwa kugaisa chibage pamwe nekutakura zvirimwa zvavo kuti vanozvitengesa kuHarare.
Mumwe mugari wenzvimbo iyi, VaGibson Mutegude vemuWard 8, vanotiwo chave kutyisa ndechekuti vakadzi munzvimbo yavo vave kutyityidzirwa kuti kana vakasasiya MDC vachienda kuZanu PF vacharohwa zvakaipisa sezvakaitika muna 2008.
VaMutegude vanoti vese vakarova nekubhinya vanhu pasarudzo dzemuna 2008 havana kusungwa zvisinei kuti vakamhan’arirwa kumapurisa.
Mumiriri weUzumba mudare reHouse of Assembly, VaSimbaneuta Mudarikwa, vanoti havana chavanoziva panyaya iyi vachiti ivo pachavo vanoda kuti vanhu vese vemuZimbabwe vagare zvakanaka zvinisei kuti ndevebato ripi.
VaMudarikwa vanotiwo kana paine munhu anorambidza vanhu kugaisa pachigayo chake, munhu iyeye ndiye ari kutorasikirwa nebhizimisi.